I-gvSIG 2.0 kunye noLawulo loMngcipheko: ii-webinars ezizayo ze-2-iGeofumadas
Meyi, 2013 Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, GvSIG
Yinto umdla kangakanani zemveli zokufunda uluntu babakho ngendaleko yaye yintoni kanye efunekayo igumbi inkomfa kunye iingxaki zawo umgama nesithuba, ukususela i iPad kunokubonwa ukusuka naphi na ehlabathini.
Kulo mongo, kusondele kakhulu ukuphuhlisa ii-webinars ezibini ekufuneka sonke sizisebenzise, ​​sicinga ukuba oku akudingekile ukuba ushiye iofisi okanye umsebenzi wesiqhelo:
Oku kuya kuba yi-7 kaMeyi kwaye ikhuthazwa ngu-MundoGEO kunye ne-GvSIG Association.
IWebinar ngoMeyi 7 kwaye ibandakanya ukuboniswa kwezinto ezintsha zenguqulo entsha ye-gvSIG, kwaye kufanelekile ukwazi umahluko ophambili phakathi kwalo mgca kunye neenguqulelo eziyi-1.12x ezingasayi kuqhubeka phantsi kolo phuculo emva kokufika kwale nguqulo ukuya kuthi ga kwinqanaba lokukhululwa njengohlobo oluzinzileyo. Iya kuba ngumdla ukwazi izinto eziza kwenzeka kwiinyanga ezizayo.
Kunye nobhaliso free, esi siganeko online ejoliswe bonke abasebenzisi kunye nababhekisi phambili lwe Desktop gvSIG abanomdla ukwazi iimpawu eziphambili kwinguqulelo 2.0, kwaye ikamva kulo.
Isithethi siya kuba ngu-Álvaro Anguix, uMlawuli Jikelele we-GvSIG Association. nxaxheba webinar unako ukuqhagamshelana nomqhubi-ngokusebenzisa ingxoxo, ukongeza ukulandela isiganeko on Twitter (#webinar @mundogeo). Bonke abathathi-nxaxheba be-intanethi yale khomishoni baya kufumana izatifikethi zokuthatha inxaxheba kwabo.
Joyina nathi kule webinar!
iWebinar: gvSIG Desktop 2.0
UmhlaNgoMeyi 7, 2013
intaba: 14:00 GMT
Xa ubhaliso lwenziwe, uya kufumana i-imeyile yokuqinisekisa kunye nekhonkco yokufikelela kule webinar.
Iimfuno zenkqubo: I-PC - yeWindows 7, Vista, XP okanye 2003 Server / Macintosh-Mac OS X 10.5 okanye intsha / iselfowuni - i-iPhone, i-iPad, i-Android
Bhalisa mahhala kule webinar:
Ulawulo olutsha oluphuthumayo usebenzisa iCrographic.
Oku kukhuthazwa yiMiyalelo yeMagazini, apho uya kufunda ukuba iqela leCrisis Response lenze njani ukuba ulwazi lokulungiselela lufumaneke kubasebenzi abaphendula ngokukhawuleza kunye nabemi ngexesha leNkanyamba uSandy. Sebenzisa izixhobo ze-geospatial ezinje ngeGoogle Injini yeeNjini, iqela leCrisis Response lisebenze neearhente ezahlukeneyo ezinxulumene nentlekele ukuqokelela nokwabelana ngolwazi ngeMephu zeCrisis, isixhobo esivulekileyo esenziwe liqela. Imephu yeSandy 50 ziqendu + zibandakanya:
Ukulandelela indawo, kubandakanywa neendlela ezikhoyo kunye neengqungquthela ezilindelekileyo, ngokuhambelana neNAAA yeziZwe zeSizwe
Izaziso zomphakathi, kubandakanywa izaziso zokukhutshwa, izixwayiso zesiphepho kunye nokunye, ngokubanzi mozulu kunye nenyikima.usgs.gov
Iidarari kunye nefayili imifanekiso esuka kwi-weather.com kunye neLebhu yeeNzululwazi zoPhando lwe-US
Ulwazi lwe-Evacuation kunye nemizila, kuquka ne-NYC e-NYC Open Data evacuation roads
Amaziko okuhlala kunye namaziko okubuyisela, izitishi zegesi ezivulekileyo kunye nokunye
Izifundo ezifunyenwe kwiqela lempendulo yeCrisis ngokumalunga nemephu yeengxaki ezikhoyo
Njengoko iqela lisetyenziselwa ukuxhamla ukuqhubela phambili ukugcina enye yezona ndawo zikhethiweyo zeemephu zamatye
Ziziphi iimpawu ezinjengeMaphu yeCrisis kunye neGoogle Maps Engine onokukunceda emsebenzini wakho wokuxakeka
Ababonisi baquka i-Christiaan Adams yeGoogle Earth kunye ne-Google Crisis Response, kunye noJennifer Montano, umphathi welizwe jikelele.
Sijoyine ngoMeyi 9 2:00 PM- 3:00 PM EDT
Nabani na onomdla kwii-Google geospatial zixhobo, ngakumbi abo bachaphazelekayo kwiimeko zolawulo oluphuthumayo
Ikhompyuter yekhompyuter eneWindows 7, Vista, XP okanye iServer ka-2003
Ukuba yi-Macintosh Mac OS X 10.5 okanye entsha
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-GeoConverter ikuvumela ukuba udibanise iinombolo ezidibeneyo ze-sms XSD
Post Next MundoGEO # Qhagamshela ubhengeza abagqwesileyo bokugqibela kumabhaso e-2013Okulandelayo »